Pane here mushandirapamwe wekurambidza kushandurwa kwezviri mukati meInternet? | Kubva kuLinux
Pane here mushandirapamwe wekurambidza kushandurwa kwezviri mukati meInternet?
Kutevera kutongwa kwevaridzi ve Taringa!, imwe yehama dzinomhanyisa saiti yakakurumbira yakapa nharo dzayo mukirasi yeyunivhesiti (UBA - Kutaurirana). Mariri, zvakakurukurwa nei zvichikosha kushora shanduko yezvinyorwa paInternet ... kugovana kwakanaka, kwete kwakaipa. 🙂
"Vangani venyu vaisa kana kurodha pasi zvinhu kubva kuTaringa!?”Vanosvika vanhu zana nemakumi mashanu vakasimudza maoko; Ivo vese vaivapo mukirasi yeFakisheni yeSocial Sayenzi yeUBA, uko gakava pamusoro pekodzero, kupara mhosva kwemaitiro emakomputa, tsika yemahara uye kutenderera kwezvinhu zvetsika paInternet zvakatanga. "Mazuva ese tinotyora mutemo nekuti haufambirane nenguva yedu yehunyanzvi", Akaongorora mudzidzisi uye nyanzvi muKutaurirana neNew Technologies Beatriz Busaniche, mubati wechigaro chekuronga chemusangano icho chaivepo pamberi paMatías Botbol, ​​muridzi, pamwe nemunin'ina wake Hernán, webhusaiti iyo mashandiro ayo akaita kuti vagadziriswe ne Criminal Justice se "vanodiwa vatori vechikamu" mune mhosva yekutyora zvinhu zvehungwaru. Nyaya iyi, yakamutsiridzwa nesarudzo yeNational Chamber of Appeals, yakaunzawo pamberi pevateereri nyanzvi yemasvomhu Enrique Chaparro naGlenn Postolski, director weCommunication Sciences Career, uyo aizoenderera mberi zvishoma pasi nekutsanangura izvo " heino mubvunzo weimwe yematanho echinyakare uye emangwana: ndedzipi kodzero dzinofanira kukunda ”. Chero zvazvingaitika, akayambira, "kufambira mberi kwetekinoroji hakumire kuburikidza nematare".
Izvo zvaive zvekutaura nezvekuyedza kupara mhosva kwese kwese kuita, dzimwe nguva kutotadziswa (iwo mawebhusaiti anogadzira chinhu anogona kuwanikwa munyika dzinogamuchirwa kugovana) uye izvo hazvitombodi munhu anoda kugovera, mumwe munhu ane kuda kuziva, mumwe munhu ane yenzvimbo yekuudza kuti iriko, uye kumwe kwekugara nayo. Iko kupinda mumunda wezvidzidzo wenhau dzekutonga kuri kuenderera kwakachinja icho chaive kirasi yemusangano kuita musangano wekukurukura nevadzidzi nevokunze. Paive nekufarira: munzvimbo iyo iyo Fakitori yainge yafanoona nezve gakava, hapana pini yaigona kupinda, uye paive nevaya vakaunganidzwa pamusuwo kuti vasarase ruzivo.
"Imi mese, munotora kana kurodha zvinhu kuTaringa!, Muri vatori vechikamu vanodiwa: zvamunoita kutyora Mutemo 11.723, muchinyorwa chayo 72," akadaro Busaniche achitaura nezveizvo Mutongi aifunga kutongesa hama dzeBotbol. Chinyorwa ichocho ndicho chinosimbisa kuti chinotyora kodzero dzepfuma "chero munhu anogadzirisa, anotengesa kana kuburitsa neimwe nzira kana chiridzwa, basa risina kuburitswa kana rakaburitswa pasina mvumo yemunyori kana varidzi venzvimbo", tsananguro inogonesa vaparidzi uye makambani ekurekodha kukumbira kutenderera kwezviri mukati. "Asi mutemo hautauri chinhu nezve chinangwa chebatsiro, unongoreva kubereka chete. Uye ndiyo mhosva yatinoita tese. Kana iwe ukauya kune ino fekitori, ini handitombofaniri kukuyeuchidza kuti iwe wakadzidza nemaphotocopies."
Busaniche akayeuka kuti "makore gumi apfuura" munzvimbo dzakasiyana dzepasi makambani makuru akakumbira "kuyedza kupa mhosva" nzira iyi yekugovana zvinhu paInternet, "chishandiso chakakura chetsika chatati tamboziva." “Havana kubudirira kutiita kuti tirege kuteedzera nekuti itsika inogamuchirwa munharaunda. Hapana munhu anonyatsotenda kuti kuba mota kwakafanana nekutora rwiyo."Panguva ino, riini"kune akawanda marongerwo emitemo ari kutenderera, "akawedzera," ichi chinofanirwa kuve chimwezve". "Ndosaka tichifunga nezvazvo ronga mushandirapamwe wekurambidza nzira iyi yekugovana zvemukati. Kana zvisiri, rusununguko rwekutaura ruri panjodzi, iyo Internet sekuiziva kwedu ”.
“Inyaya yakakomberedzwa nevatambi vane simba kubva mumaindasitiri emunyika nekunze. Nzvimbo senge Taringa! mumakore gumi ekudzidzira, vanoomesa bhizinesi modhi kubva muzana ramakore rapfuura ”rakachengetedzwa nemutemo wa1933, akaongorora Postolski, uyo muchuchisi wehama dzeBotbol ane muenzaniso wakanaka kupfuura chinangwa chakasimba chekuranga. "Aya maindasitiri ane simba rekukurudzira uye rekudaidzira zvekuti nguva yega yega kodzero painopera, vanowana kuwedzerwa uye nguva yekuchengetedza inowedzerwa zvakare, uyezve." “Isu tese tinoziva kuti zvinotidhurira kushambadza bhuku, kugadzira chinyorwa uyezve kufunga nezvekuchigovera. Nechikonzero ichi, mukuchinja uku, tinofanirwa zvakare kufunga nezvekuzadzikisa mamiriro anotendera vanyori nevagadziri kuti vave nehupenyu hune chiremerera uye vagone kuenderera nekugadzira ", akadaro, kuratidza kuti gakava rinoita kunge risingabatanidzi vanyori nevamiririri. simba rekumanikidza uye kumanikidza kwemutemo. Nezve izvo, nguva pfupi yapfuura, nyanzvi yemasvomhu Chaparro yaizogadzira hasha: "izvo zvinoberekwazve hazviperi, asi chero uyo akasunga mombe haadi kurega ... Uye isu tinoshuvira kuisunungura."
"Vanhu vanogovana ruzivo rwunonakidza kwavari" uye kune avo vanozvitsvaga. "Zvinoenderana nezvinodiwa zvisina kugutsikana neimwe nzira mashandiro anoita Taringa!" Uye kwatiri, kuzviona mazuva ese chinhu chitsva ”, akadaro Botbol, ​​muratidzi akamirirwa kwenguva refu kuti hapana chakakanganisa nguva yake. Co-inotarisira saiti iyi pamwe neanosvika mamirioni matanhatu kushanya kwemazuva ese uye, kudzamara panguva yekutonga zvekare, vamwe vashandisi zviuru makumi maviri vakanyoreswa kekutanga zuva rega rega, akatsanangura dandemutande remapositi uye nekudyidzana kwekudyidzana se "nyika ine hupenyu hwayo" umo iye nemukoma wake vanokudziridza "zvikumbiro zvevashandisi zvekugovana." "Sei Taringa! kwete kudzima zvese zvekuburitsa ma link? Nekuti kwete mune zvese zviitiko hazvisi pamutemo, "akatsanangura, asati arangarira nyaya yemushandisi weUruguay uyo akagovana a mupfupi amateur akaitwa naiye: iyo kurudziro inoparadzirwa nehutachiona simba; yaive nemamirioni emaonero. “Yakaguma yave nzvimbo yepamusoro yemwedzi. Vakaonda vakatumirwa maemail kubva kuma studio emafirimu muLos Angeles; akafamba. Akapedzisira asaina madhora makumi mana emamiriyoni emadhora kuti agadzire bhaisikopo risati ratonyorwa. Kana ndikatadza kuigovana, hazvaizoitika. " Neichi chikonzero, akadaro, "hazvina kunaka kufunga kuti kugoverana kutyora kodzero dzeumwe munhu. Kune rimwe divi risingataurwe nemapepanhau nenhau dzekutongwa kwedu ”.
mabviro: peji 12
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Pane here mushandirapamwe wekurambidza kushandurwa kwezviri mukati meInternet?
Trisquel 4.5.1 inowanikwa!
Mapurojekiti ekutanga emahara eiyo FSF